Shirwaynaha Isgaadhsiinta Dunida oo DF Somalia Guul kasoo Hoysay | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Shirwaynaha Isgaadhsiinta Dunida oo DF Somalia Guul kasoo Hoysay
Sep 13, 2019 - 7 Aragtiyood
Hargeisa ( Kalshaale ) Wasiirka Boostada, Isgaadhsiinta iyo Teknolojiyada Eng. Cabdi Cashuur Xasan ayaa sheegay in Soomaaliya ay guulo la taaban karo ka soo hoysay Shirweynaha Isgaarsiinta Adduunka ee ka socday caasimadda dalka Hungary ee Budapest.
Wasiirka iyo wafdigiisa ayaa intii uu shirka socday waxay shirar-doceedyo kala duwan la yeesheen dalal iyo hay’ado caalami ah oo ay kala hadleen sidii loo sii horumarin lahaa isgaarsiinta iyo teknolojiyada dalkeena.
Kulankii ugu horreeyay ayay wasiirka iyo Maareeyaha Guud ee Hay’adda Isgaarsiinta, Md. Cabdi Sheekh, waxay la yeesheen Xoghayaha Guud ee Midowga Isgaarsiinta Caalamiga (ITU), Houlin Zhao iyo ku-xigeenkiisa arrimaha Horumarinta, Ms. Doreen Bogdan-Martin, iyagoo ka wada hadlay sidii loo qiimeyn lahaa waxyaabihii ka qabsoomay Qaraarka 160 ee u gaarka ah taageerada Soomaaliya ee dhammaadkii sanadkii hore lagu ansixiyay Shirweynaha ITU.
Wasiirka ayaa ka mahadceliyay kaalintii ITU ay ka geysatay diyaarinta Siyaasadda & Istaraatiijiyada Isgaarsiinta iyo Teknolojiyada Qaranka, Tababarkii ugu horreeyay ee ay ITU ku qabatay Soomaaliya 30 sano kadib, iyo qorshayaasha kale ee haatan ay ka wada shaqeynayaan Wasaaradda iyo ITU.
Wasiirka iyo wafdigiisa ayaa sidoo kale la kulmay wasiir ku-xigeenka ganacsiga iyo teknolojiyada dalka Shiinaha, Mr. Zhaoxiong Chen, iyo wafdi uu hoggaaminayay, iyagoo kala hadlay sidii dalka Shiinuhu gacan uga geysan lahaa dhismaha kaabayaasha isgaarsiinta iyo teknolojiyada dalkeena. Labada dhinac ayaa ku heshiiyay in ay iska kaashadaan horumarinta teknolojiyada, sida kaabayaasha isgaarsiinta ee ay dawladuhu maalgeliyaan, aqoonta teknolojiyada ee dhallinyaradeena iyada oo loo sii marayo Machadka Isgaarsiinta Qaranka, iyo sidii shirkadaha isgaarsiinta iyo teknolojiyada labada dal ay u yeelan lahaayeen xiriir wada-shaqeyn oo ballaaran.
Dhinaca kale ITU ayaa si weyn u ammaantay guulaha ay Soomaaliya labadii sano ee la soo dhaafay ka gaartay dhinaca isgaarsiinta iyo teknolojiyada, gaar ahaan kaalinta dawladda ee dhinacyada sharciyada iyo siyaasadaha furfurnaanta, iyagoo xusay in wixii ka dambeeyay 2017 in Soomaaliya ay noqotay dalka 2aad ee ku yaalla Geeska Afrika ee leh sharci isgaarsiineed, Hay’ad isgaarsiineed iyo siyaasad qaran oo dhinaca teknolojiyada, iyadoo sidoo kale la kordhiyay wada-shaqeyntii kala dhexeysay dalka dhinaca ITU ka dib markii la soo celiyay xubinnimada muddo 30 sano kadib. ITU waxay si gaar ah u xustay in Wasiir Cashuur uu noqonayo wasiirkii ugu horreeyay ee muddo 3 sano ah oo isku xigta ka soo qeyb gala shirweynahan tan iyo markii Soomaaliya ay ka baxday saaxada ITU 1991-kii, taas oo sahashay in la sii joogteeyo guulaha ay Wasaaraddu ka gaareyso arrimaha isgaarsiinta iyo teknolojiyada.
In uu daanyeeryahay ninkaan wasiirka dowladda dhexe lagu sheego ma isgaarsiin dowladda dhexe eey leedahay, amaba hagto, amaba kaalmeeyso ayaa jirta? Daanyeer. Wasiirada kale ee lasheego waa lamid. Waa magac u yaal, iyo boosas just lagu buuxiyay si daanyeerta Somalida ee qabiilka caabuda lagu kala qanciyo.
Wax shaqo isgaarsiin, iyo shaqo kale oo wasaarad oo eey dalka u qabaan kuwa wasiirada sheegta iyo bosses kooda, madaxdooda majirraan. Shirkaddo tuugo ah, oo iimaan beelayaal ah, ayaa Somaliya yimid, oo wax walba iyada oo aanan cid regulate gareeyneeysa jirrin, kaga ganacsadda dalka. Dhinac walba, waxbarasho, koronto, beeor, isgaarsiin etc.
Oh, tan ugu darran, amniga, taas outsourcing ayaan ku sameeynay, oo waxaanba ku wareejinay niman Afrikaan ah, oo lacag fadhiga iyo jiifka ku qaata, oo ilaaliya daanyeertaan wasiirada isku sheego.
African kama ilbaxo Baabuur GD ah iyo Warshado Dowladdu leedahey oo la iska dhuuqo.
Shuuci iyo Amaan Yaxaas soo waxaan Tuurnay maahan
Iimaam Dabshid, bacda salaam.
Haa, waliba Afrikaanka Somalida ayaa uGu sii darran. Musuqmaasuq iyo wax aanan la shaqeeysan oo magaca dowladda lagu cunno, waa sababta aan u sameeysanay dowlad dhexe, oo laba aqal oo ciidaan kabadan iyo wasiiro ciidaas kabadan, iyo shaqaalo ciidaas kabadan u sameeysanay. Markii intaas nagu filnaanweeyday, ayaa kuwii yaryaraa ee goboladdana, qabiiladooda maamulo madaxweeynayaal, iyo xildhibaano iyo wasiiro leh sameeystay.
Waligaa ma’aragtay qof Somali ah, mas’uul amaba shiiq, amaba madaxweeyne hore, amaba mid hadeer oo ka hadlaya in waxaan oo dhan loo sameeystay in wax lagu cunno, wax aanan la shaqeeysan lagu cunno?
Kaba darrane, intaas oo dhan, wax shaqo ah oo eey dadka u qabtaan malahan!
Oh, waxaan hilmaamay, guryahii bangaariyada, iyo baabuurtii iyo boosaskii properties kii magaca dowladda lagu boobayay, waa waxa eey kuligood wada raadinayaan. Daanyeero tuugo ah.
Cadaado adeer, HADDAAN dacdda aad ku galgalanaysaan idinla galo WAXAAN ku leeyahay; “Hanno gefin HABAWGAAN Dabshida IIMAAN waxba kama ogee”. WBT
Dabshid annaga ayuu iimmaam noo yahay, oo uma ahan Daaroodka aad sheegato, ee maxaa kaa galay adiga?
Imaam in uu yahay Dabshid waxaad ku garan adeer ayuu kuu yeeraa, oo aanan anniga go’aansaday in aanan kuugu yeerin, saa waxaan aaminsanahay in cinwaankaas aadan u qalmin. Adigana Iimaanimo ayaad u diidantahay.
Btw, dacda aad ka hadleeyso, mid ka darran ayaad ilaa iyo waagii aad dowladii kaligiis taliyaha ka shaqeeyneeysay ilaa hadeer ku dhex dabaalataa. Waxaadba kamid tahay masiibada Somaliya ku dhacday.